दीपकराज र निश्चलले बनाउने एउटै फिल्म कस्तो होला ? « Nepal Bahas
दीपकराज र निश्चलले बनाउने एउटै फिल्म कस्तो होला ?
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:३६
१६ कार्तिक, काठमाडौं । कोरोना महामारीको मारमा परेको फिल्म बजारलाई चलायमान बनाउन ठूला निर्माता निर्देशकबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय निर्माता तथा निर्देशक दीपकराज गिरी र चर्चित निर्देशक निश्चल बस्नेतबीच सहकार्य हुने सम्भावना बढेको चर्चा छ ।
दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, निश्चल बस्नेत र स्वष्तिका खड्काबीच भेट भएको फोटो सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएको थियो । दीपा र दीपकराज एक फिल्मी जोडी हो भने निश्चल र स्वष्तिमा श्रीमान श्रीमति हुन् ।
पछिल्लो समय यी चारै जना नेपाली फिल्मका चल्तीका कलाकार तथा निर्माता निर्देशक हुन् । खासगरी स्वष्तिमा सफल नायिकामा दरिएकी छिन् । उनीहरुबीच चलचित्र निर्माण गर्नेबारे कुरा भएपनि कुन फिल्म बन्ने भन्ने एकिन छैन् ।
यद्यपी यसबारेमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । लुटबाट नेपाली चलचित्रको जनरा नै परिवर्तन गरेका निश्चल र नेपाली हास्यव्यंग्यलाई नै चलचित्र कथामा ढालेका दीपकराजले बनाउने आखिर एउटै फिल्म कस्तो होला ? दर्शकको चाँसो बढेको छ ।
अभिनेता निखिल नयाँ फिल्म बनाउने तयारीमा
‘लाखे’ फिल्मका लागि अडिसन मार्फत १० कलाकार छनौट
अमेरिकामा दोस्रो ‘ज्योमो गाङ फिल्म अवार्ड’ आयोजना हुने
चलचित्र एरर्स अफ गडको टिजर सार्बजनिक